Mividy sy mivarotra karatra fanomezana amin'ny Internet! | Martech Zone
Talata, Desambra 26, 2006 Talata, Desambra 26, 2006 Douglas Karr
Ara-potoana fotsiny amin'ny fialantsasatra. Fantatrao ve fa ny 10% amin'ny kara-panomezana rehetra dia tsy voavotra mihitsy? Vola maimaimpoana ho an'ireo mpivarotra izany.
Nahazo karatra fanomezana izay tsy hampiasainao mihitsy? Amidio ao amin'ny Swapagift!
Alohan'ny handehananao mividy ny namanao, ny fianakavianao ary ny mpiara-miasa aminao, dia tokony hividy azy ireo ianao Swapagift… Amin'ny fihenam-bidy!
Heck, miaraka amin'ny fihenam-bidy 12% rehefa mividy azy, maninona raha mividy karatra fanomezana an-tserasera ary manao izany miaraka aminao fotsiny?
Nanamarina aho androany ary afaka mividy $ 40 Card Starbucks $ 35 !!! Mocha maimaim-poana izany!
Fanamarihana: Swapagift.com dia manamarina ny fifandanjana amin'ny karatra fanomezana alohan'ny handoavana ny vola. Hevitra tsara tokoa izany!
Dec 26, 2006 ao amin'ny 2: PM PM
Nahita iray hafa koa aho:
Mar 10, 2007 ao amin'ny 5: PM PM
Ny safidin'i Swapagift.com dia tena tsara. Nividy karatra maromaro aho, ary misy dokam-barotra sy varotra foana izy ireo. Vao nividy karatra miafina Victoria ho an'ny 20% tsy misy sarany fandefasana.